Oge: 2019-02-18 Hits:
Kirby \_ 's Epic Yarn bụ a 2010 n'elu ikpo okwu video egwuregwu mepụtara Good-obi na-adị na Hal Laboratory na bipụtara Nintendo maka Wii video egwuregwu console. Ọ bụ iri nkeji nkeji nke Kirbyvideo egwuregwu usoro na e wepụtara na October 2010 na Japan na North America na na February 2011 na Australia na Europe. Ọ bụ mbụ ntinye ke Kirby usoro na a home console kemgbe 2003 \_ 'sKirby Air Gbaa ịnyịnya na ya nke mbụ ya n'ụlọ console ikpo okwu egwuregwu kemgbe 2000 \_ 's Kirby 64: The Crystal shards.
The egwuregwu ndị a Kirby, onye e ghọọ yarn na zigara Patch Land, a ụwa mere kpamkpam nke ákwà. Ọ ga-enyere Prince efu site obon asaa iberibe anwansi yarn na-eji Stitch Patch Land ọnụ iji na-akwụsị egwuregwu \_ 's eti ọkpọ, Yin Yarn. Kirby \_ 's Epic Yarn utilizes a pụrụ iche craft dabeere visual style; egwuregwu \_ 's odide na gburugburu iso kpamkpam nke yarn, ákwà, na ndị ọzọ na craft ihe. N'adịghị ka ọtụtụ egwuregwu ke Kirby usoro, Kirby bụ enweghị ike eloda ma ọ bụ ofufe, kama ịdabere na ike morph n'ime ihe ndị ọzọ, dị ka a parachute, a ụgbọ ala, na a ụgbọ okpuru mmiri, nakwa dị ka ibu ihe dị otú ahụ dị ka a tank na a uzuoku ụgbọ okporo.
The atọ egwuregwu mepụtara site Good-eche na tandem na Nintendo, Kirby \_ 's Epic Yarn mbụ chọrọ site Madoka Yamauchi, onye wee na echiche nke a "ụwa nke yarn" dị ka a video egwuregwu. Ọ malitere mmepe dị ka "Keito dịghị efu", a egwuregwu starring Prince efu dị ka isi protagonist, tupu starring agwa E mechara Switched Kirby. The egwuregwu \_ 's onyeōzi style e kere via digital oyiyi nke real-ndụ akwa nke e debere ihe polygons. The egwuregwu \_ 's music e dere Tomoya Tomita.
Tupu egwuregwu \_ 's ntọhapụ, Kirby \_ 's Epic Yarn merie ọtụtụ enọ na E3 2010 na nsonye Game nke Gosi si Gamespot. Ọ e wepụtara mgbe e mesịrị na afọ na n'ụzọ dị ukwuu mma reviews, anata ihe Editor \_ 's Choice award si IGN, onye họọrọ ya ka #95 na ha "Top 100 Modern Games". Dị ka nke April 2011, ọ na-ere 1.59 nde n'ụwa nile. Ọ na-e re-tọhapụrụ digitally site na Wii U eShopna Europe na Australia na May 21, 2015, na North America on July 28, 2016, na na Japan na August 9, 2016. A ime mmụọ nọchiri Kirby \_ 's Epic Yarn akpọ Yoshi \_ 's woolly World e wepụtara na 2015 maka Wii U.
Previous : Mmetụta Hong Kong
Osote : Eri arọ Isiokwu